Ebe nchekwa nke Kildare onye ọgba ọsọ - N'imeKildare
Nleta na mpaghara Thoroughbred agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na ị nwetaghị ụbọchị agbụrụ n'otu n'ime usoro ịgba ọsọ ama ama n'ụwa ma ọ bụ ịhụ ịnyịnya na-abịaru nso na ebe ahụ. Ọmụmụ Ihe Ọchịchị Irish.
Ha na-ekwu na ebe akụkọ ifo na-adịte aka, akụkọ ihe mere eme na-esote. Akụkọ mgbe ochie na-ekwu na Fionn mac Cumhaill na ndị dike ya na-agba ịnyịnya ha na mbara ala oge ochie nke Curragh. Akụkọ na-agwa anyị na ụgbọ ịnyịnya nke ndị eze na ndị isi narị afọ nke atọ na-agba ọsọ ebe a. Odida obodo a mere akụkọ ihe mere eme nke Ọwụwa Anyanwụ ochie nke Ireland ka na-anọgide na-akụ isi obodo ndị ọgba ọsọ Ireland.
Wepụta oge n'ọsọ a - nwere ọtụtụ usoro ịgba ọsọ agbagoro na County Kildare, obi ụtọ nke ụbọchị agbụrụ bụ otu ị ga-ahụ. Kedu ihe kpatara na ị gaghị enyocha ime obodo n'ịnyịnya, na-aga n'okporo ụzọ obodo, na ala ochie na ọhịa ochie. Ma n'ezie, ọ nweghị njem na Kildare zuru ezu ma ọ bụrụ na ịgaghị na Irish National Stud ebe ị ga-achọpụta akụkọ banyere nnukwu ọdụ ụgbọ elu nke oge gara aga.